विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा ६ सय वढि लाभान्वीत-Nagarikaawaj.com
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा ६ सय वढि लाभान्वीत
बुधबार, कार्तिक २०, २०७०
नेपालगञ्ज, कात्तीक २० । बेलहरी गाउ विकास समिती नेपालगञ्जको अनुदान र बेलहरी उप स्वास्थ्य चौकीको सक्रियतामा गत हप्ता विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम भएको थियो । दृष्य परिक्षण, पोषण स्थिती मापन, स्वास्थ्य जाँच, जुकाको औषधि वितरणका साथै प्राथमिक उपचार बक्स वितरण कार्यक्रम संचालन गरी बेलहरी गा.वि.स. अन्तरगतका ६ वटा विद्यालय तथा मदरसाका शिक्षक विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण समेत गरिएको थियो । यि विद्यालयहरुले आगामी दिनहरुमा हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य रोगका साथै जुकाको समस्याबाट ग्रसित भई धेरै रकम गुमाउन पर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाएका छन् ।
नेपालमा विभिन्न अध्ययनहरुले विद्यालय उमेरका विद्यार्थीहरुमा जुकाको संक्रमण रहने देखाएका थिए । सोही अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय बाँके अन्र्तगत उप स्वास्थ्य चौकी बेलहरीको सहयोगमा सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाई जुकाको औषधि समेत वितरण गरिएको थियो । शो कार्यक्रममा ६ सय ८७ विद्यार्थीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वीत भएका थिए ।
विद्यार्थीहरुको पोषण स्थिती मापनबाट कुपोषित बालबालिकाहरुलाई पोषणयुत्त खानाको सल्लाह दिनुको साथै विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्व जन्य औषधि वितरण गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको शारिरीक तथा मानसिक विकासमा टेवा पुगी सबल सक्षम तथा आर्दश नागरिक बन्ने करामा विश्वास गरिएको छ ।
त्यसै गरि विद्यार्थीहरुको दृष्य परिेक्षणले उनीहरुको दृष्य कमजोरी रहेको नरहेको जानकारी हुनुका साथै शिक्षण क्रियाकलापमा समेत फाइदा पुगेको छ । यसै कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य जाँच पनि गरियो र उप स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध गराएको औषधि वितरण पनि गरियो जसले विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । जहाँ दिर्घ रोगी देखि सामान्य रोग सम्म आएका थिए ।
यस स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमले विद्यालय परिवार मात्र लाई फाइदा नपुगी अभिभावकलाई समेत आर्थिक फाइदा पुगेको छ त्यसैले धेरै अभिभावकहरुले धन्यवाद दिनुभएको र आगामी दिनहरुमा यस्तै कार्यक्रमहरुको अपेक्षा राखेका छन । यहि स्वास्थ्य जाँचमा अधिकांश विद्यार्थीहरुमा कान तथा दातको र सरसफाई सँग सम्बन्धित रोगहरु बढि रहेको पाइयो ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक उपचार बाकस वितरण कार्यक्रममा ६ वटा प्लाष्टिकको प्राथमिक उपचार बाकस बेलहरी गा.वि.स. अन्र्तगत रहेका सम्पुर्ण विद्यालय तथा मदरसाहरुमा वितरण गरिएको छ जुन बाकसमा अत्यावस्यक पट्टि, कपास, कैची, फोरसेप, औषधि आदि राखिएका छन । जुन विद्यालयमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका घाउ चोटपटक, दुर्घटना, झाडापखाला, बान्ता, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्याहरु हुनासाथ काम लाग्ने औषधिहरु राखिएको छ । यिनी औषधिको सेवनले तथा प्रयोगले तुरुन्त औषधि पाउन र ठुलो स्वास्थ्य संस्थामा तथा अस्पतालमा जाने अवस्था सम्मको लागि औषधि पाउन सक्नेछन जस्ले गर्दा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा गिरावट आउन पाउदैन र स्वास्थ्य स्थिती सामान्य रहन्छ ।
विश्व रक्तदाता दिवस : बुटवलमा रक्तदातालाई पदकसहित सम्मान
शान्ति समाज रुपन्देहीद्वारा रक्तदान,४० युनिट रगत संकलन
विश्व रक्तदाता दिवस : बुटवलमा अन्तरक्रिया सम्पन्न